देशैभरी टेलिकमको फोजी विस्तारको लागि काम सुरु, जान्नैपर्ने केही कुरा ! « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०७६, सोमबार १५:१८
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशैभरी फोजी विस्तारको लागि काम सुरु गरेको छ । फोजी विस्तारको जिम्मा पाएका कम्पनीहरुले सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमको फोजी विस्तारको कूल लागत १८ अर्ब ७१ करोड छ ।
भ्वाइस ओभर एलटीई नाम दिइएको यो सुविधाले मोबाइल नेटवर्कमा हुने भ्वाइस कलको गुणस्तर बनाउँनेछ। डाटाको गतिजत्तिकै भ्वाइस ‘आवाज’को गति पनि बढ्नेछ। यसले फोन लाग्ने समय पनि घट्नेछ। साथै, यो सुविधामा भिडियो कल गर्नको लागि तेस्रो एपको आवश्यकता पनि आवश्यक पर्दैन।
टेलिकमको फोजी नेटवर्कमा पूर्णरुपमा स्वचालित सेल्फ अर्गनाइजिङ नेटवर्क ९एसओएन० प्रविधि रहने छ। यसको अर्थ हो कुनै बीटीएस टावरमा कुनै समस्या आएर नेटवर्कमा गडबडी भए त्यो भन्दा पर रहेको अर्को बीटीएस टावरले त्यो समस्या बुझेर आफ्नो क्षेत्र बाहिरको मोबाइललाई नेटवर्क प्रदान गर्नेछ। यो पूर्ण रुपमा स्वचालित प्रविधि हुने टेलिकमले जनाएको छ।
कसले पाए काम ?
हङकङस्थित चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसन ९सीसीएसआइ० ले रेडियो एक्सेस नेटवर्क ९र्‍यान० र जेडटीईले कोर नेटवर्क विस्तारको काम पाएका छन्। टेलिकमको टावरहरुबीच सम्पर्क स्थापित गराउने काम कोर नेटवर्कले गर्छ भने ग्राहकको फोनबाट टावरसँग सम्पर्क गराउने काम रेडियो एक्सेस नेटवर्कले गर्छ।